गृहमन्त्रीको अत्यन्तै आपत्तिजनक अभिव्यक्ति
कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्यामा संलग्न दोषीहरू १ वर्षसम्म पक्राउ पर्न सकेका छैनन् । २०७५ साउन १० गते कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो ।
निर्मला हत्याकाण्डलाई लिएर वर्षभर नै सरकारको आलोचना भयो । सरकारका मन्त्रीले पटक–पटक संसदको रोस्टममा उभिएर यसबारे जवाफ दिनुपर्‍यो ।
हत्यारालाई कारवाहीको माग गर्दै अधिकारवादी सडकमा उत्रिए, प्रतिपक्षी दलले संसद अवरुद्ध गर्‍यो । निर्मला हत्याकाण्डको विरोधमा उठेको आन्दोलनमा १ जनाको मृत्यु समेत भयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समेत नेपालको बदनाम भएको किशोरी बलात्कारको घटनालाई गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले सधै हल्काफुल्का ढंगले लिँदै आएका छन् । मंगलवार गृह मन्त्रालयमा वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा ‘निर्मलाका जस्ता घटना भइरहन्छन्’ भनेर दिएको गृहमन्त्रीको अभिव्यक्ति अत्यन्त आपत्तिजनक छ । गृह प्रशासनको नेतृत्वकर्ताको हैसियतमा हत्यारा पत्ता लगाउन नसकेकोमा नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्नुपर्ने मन्त्रीले बलात्कारजस्ता घटना भइरहन्छन् भनेर अभिव्यक्ति दिनु अत्यन्त आपत्तिजनक कुरा हो ।
स्मरणीय छ गृहमन्त्री थापाले संसदको राज्य व्यवस्था समिति र राष्ट्रिय सभाको बैठकमा २०७५ असोज ९ गते बलात्कारको घटना पूँजीवादको उपज भन्दै अमेरिकामा पनि यस्ता घटना हुने गरेको बताएका थिए ।
बलात्कारको घटनालाई सामान्यीकरण गर्ने र हत्यारा पत्ता लगाउन नसक्ने सरकारले मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा उपस्थित भएर कसरी नेपालमा मानवअधिकार सुरक्षित छ भनेर भन्न सक्ला ? २१ औं शताब्दीको सभ्य समाजले हाम्रा गृहमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई कसरी सहज ग्रहण गर्न सक्ला ? शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम गर्नुपर्ने सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई विश्व जगतले के भन्ला ? मन्त्रीका यस्तै बेलगाम बोली र गृहमन्त्रीको अभिव्यक्तिले निर्मला पन्तका हत्यारा र बलात्कारीको मनोबल बढाएको हुनुपर्छ ।
गृहमन्त्रीको सबभन्दा ठूलो असफलता नै निर्मलाका हत्यारा पत्ता लगाउन नसक्नु हो । यही एउटा घटनाले उनले गरेका अन्य काम छायाँमा पारिदिएका छन् । शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने मामिलामा पनि उनी चुकेका छन् ।
प्रहरी इन्काउन्टरका नाममा भइरहेका हत्याका घटना रोक्नुको सट्टा बचाउमा अभिव्यक्ति दिइरहेका हुन्छन् । सर्लाहीमा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेलको मृत्यु पनि अस्वाभाविक भन्दै प्रतिपक्षी दलले संसदीय छानबिनको माग गरेको छ भने स्वयं सत्तारुढ दलका सांसदले संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा गम्भीर प्रश्न रेकर्ड गराएका छन् ।
वास्तवमा रामबहादुर थापाले गृह प्रशासनको नेतृत्व लिएयता शान्ति सुरक्षाको अवस्था झन्–झन् खस्किँदो छ, चाहे उनले जतिसुकै सुध्रिएको दाबी किन नगरुन् । बलात्कारका घटना भविष्यमा पनि भइरहन्छन भन्ने अभिव्यक्ति गृहमन्त्रीले सच्चाउनुपर्छ, यस्तो आपत्तिजनक अभिव्यक्तिप्रति उनले माफी माग्नुपर्छ ।
मन्त्री–सांसदलाई दशैं भत्ता : फिर्ता गर जनता चिढ्याउ...
कालापानी मुद्दा : नेपालले आफ्नो वास्तविक नक्सा सार्व...
कैदीबन्दीको चाप बढेपछि चितवनबाट ९६ जनाको स्थानान्तरण
जनमोर्चा उम्मेदवारलाई भोट माग्न चित्रबहादुरसँगै प्रचण्ड र विष्णु पौडेल बाग्लुङ आउने